Magnetik filtration System Nsukka & Suppliers - China Magnetik filtration System Factory
Igwe Igwe Igwe Igwe maka Icheta Belt Nkewa
A na-eji efere magnet eme ihe iji wepụ ihe nkedo na ihe ndị na-ebugharị ebugharị na dracts, spouts ma ọ bụ eriri belt, ákwà ngebichi, na trays nri. Ma ihe a bụ plastik ma ọ bụ mpempe akwụkwọ, nri ma ọ bụ fatịlaịza, Mmanụ ma ọ bụ uru, nsonaazụ ya bụ nchebe nchekwa nke igwe nhazi.
Magnetik Grate Separator na Multi-mkpara
Magnetik grates separator na multi-mkpara bụ nnọọ oru oma na wepụ ferrous ofufe si free-eru eru ngwaahịa ndị dị otú ahụ dị ka ntụ ntụ, nsogbu dị iche iche, liquids na emulsions. Ha na-adị mfe enịm ke hoppers, ngwaahịa oriri isi, chutes na na okokụre ngwongwo tinyekwa ihe.
A na-eji otu ìgwè magnetik rụọ drawer magnet na ụlọ nchara igwe ma ọ bụ igbe igbe igbe. Ọ dị mma maka iwepụ ndị na-ajụ ase na ezi ihe mmetọ dị iche iche site na ọtụtụ ngwaahịa ndị na-agba agba n'efu. Ha na-ọtụtụ-eji nri ụlọ ọrụ na chemical ụlọ ọrụ.
Square Magnetic Grate mejupụtara Ndfeb magnet bars, na etiti nke magnetik okporo mere site igwe anaghị agba nchara. Styledị magnet a nwere ike ịhazi ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ na ọnọdụ saịtị mepụtara, magneses tubes na-adịkarị bụ D20, D22, D25, D30, D32 na ect.
A na-eme ọnyà magnet site na otu igwe magnet na nnukwu ụlọ igwe anaghị agba nchara. Dị ka otu ụdị magnetik iyo ma ọ bụ magnetik separator, ọ na ọtụtụ-eji chemical, nri, Pharma na ọrụ na mkpa ọcha na ya kacha mma larịị.
Igwe Ọdụdọ Magnetik
Emere Magnet Liquid Traps iji wepu ma hichaa ihe dị iche iche nke ihe dị egwu site na mmiri mmiri na akụrụngwa nhazi. Ferrous ọla na-magnetically amịpụtara gị mmiri mmiri eruba na-anakọtara na magnetik akpa ma ọ bụ efere-ịke magnetik separators.
A na-eji Magnetik Magnet na-ewepụ ihe ndị na-emerụ emerụ site na ihe na-asọ n'efu. All ferrous ahụ dị ka bolts, akụ, ibe, na-emebi tramp ígwè nwere ike jidere na ẹkenịmde n'ụzọ dị irè.